Saraakiil Ka Tirsan Xuuthiyiinta Oo Lagu Dilay Yemen. – Bogga Calamada.com
Saraakiil Ka Tirsan Xuuthiyiinta Oo Lagu Dilay Yemen.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah dalkaasi lagu dilay saraakiil sar sare oo Xuuthiyiinta ka tirsan.
Weeraradan oo isugu jira Qarax iyo Kamaa’ino ama weeraro dhabba gal ah waxey waqtiyo kala duwan lala beegsaday kolanyo ay la socdeen saraakiil ka tirsan Xuuthiyiinta.
Kamiinada iyo qaraxa waxey ka kala dhaceen deegaano ka tirsan gobalka Ib kuwaasi oo lagu dilay saraakiil ciidan oo ka tirsan maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ee kal hore duulaanka ku qabsaday qeybo badan oo dalkaasi ka tirsan.
Weerar dhabba gal ah oo ka dhacay deegaanka Damat ee gobalka Ib waxaa lagu dilay sarkaal sare oo Xuuthiyiinta ka tirsan kaasi oo lagu magacaabi jiray Abuu Axmed Al-cumraani’sidoo kale waxaa kamiinkaasi lagu dhaawacay labo ka mid ah ilaaladiisa.
Sidoo kale qarax ka dhacay deegaan ka tirsan goblka Ib ee qiyaastii 200KM dhanka Konfureed kaga beegsan caasimada Sanca ee dalka Yemen waxaa lagu dilay sarkaal kale oo Xuuthi ah kaasi oo lagu magacaabi jiray Abuu Caamir waxaa sidoo kale sarkaalkan lala dilay labo askari oo gaariga la saarneed.
Sidoo kale Weerar dhabba gal ah oo ka dhacay duleedka Samaarta ee gobalka Ib waxaa lagu dilay 6 askari oo Xuuthiyiin ah.
Kamiin xilli habeen ah ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Ib ee dalka Yemen waxaa sidoo kale lagu dilay sarkaal sare oo Xuuthiyiinta ka tirsan kaasi oo lagu magacaabi jiray Abuu Nimraan waxaa sarkaalkan lala dilay tiro askar ah oo ilaaladiisa ka tirsan.
Guud ahaan weeraradan lagu dilay saraakiisha iyo maleeshiyaatka Xuuthiyiinta waxaa sheegtay Mujaahidiinta Al-qaaciddah ee wadamada Jaziiratul Carab’iyagoona wacad ku maray iney sii kordhinayaan weerarada ka dhanka ah Xuuthiyiinta.